Oday 70 sano jir caawa lagu toogtay Muqdisho | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Oday 70 sano jir caawa lagu toogtay Muqdisho
Sida ay sheegayaan wararka inaga soo gaaraya degmada Hawlwadaag ee gobolka Banaadir, Rag hubeysan ayaa salaadii cishaha kadib waxa ay agagaarka iskuulka Dhagaxtuur oo ku yaalla wadada aada Bakaaraha ee ka baxda Isgoyska Dabka ku dileen nin Oday ahaa.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay inoo sheegeen ninkan Odayga ah inay toogteen laba dhalinyaro ah oo ku hubeysan Bastoolado, xilli uu fadhiyay maqaaxi yar oo lagu shaaheeyo oo ku taalla wadada geeskeeda.
Ragga dilka geystay ayaa la sheegay ninkan oo lagu magacaabi jiray Xasan Cumar Mayow inay ka toogteen qeybta sare ee jirkiisa gaar ahaan waxaa ay rasaasta uga dhufteen wajiga, sida ay inoo sheegeen dad arkay meydka Marxuumka la dilay.
sida ay Sheegeen Dadka degaanka ninkan Odayga ah da’diisa inay u dhaxeysay 60 ilaa 70 sano, halka hada lagu dilayna uu ku lahaa Dukaan yar oo lagu iibiyo alaabaha far shaxanka, sidoo kalena uu ka mid ahaa ergadii xildhibaanada Baarlamaanka ku soo dooratay Magaalada Baydhabo.
Dableyda ayaa si caadi ah goobta uga dhaqaaqay iyaga oo aan dareemeyn wax cabsi ah, halka uu dilka ka dhacay meel aan sidaas uga fogeyn waxaa bar kontorool ku leh ciidanka xasilinta oo halkaasi ku baara gaadiidka ka yimaada dhanka Bakaaraha, waxaana la sheegay in aysan ku bixin falkaasi.
Maamulka degmada Hawlwadaag ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay halkaasi tageen kana qaadeen meydka Marxuumka la dilay, iyaga oo sidoo kale tilmaamay inay ku daba jiraan raggii dilka geystay.